IPort of Siuslaw Readies Ellicott 360SL ye-Marina Dredging Project
IPort of Siuslaw Readies Ellicott 360SL Swinging Dragon Dredge to Dredge Marina
January 16, 2020 - Abasebenzi abamele i-Oregon International Port of Coos Bay basendaweni elinde imvume yokuqala ukubamba indawo Umkhumbi we-Siuslaw River. I-Siuslaw marina, esebenza yi- Ichweba laseSiuslaw, iqukethe amathani amaningana odaka, udaka nosilika abahlanganile iminyaka eyishumi, okwenza kube nzima ngemikhumbi ukuhamba ibanga elingamamayela amahlanu axhumanisa uMfula iSiuslaw oLwandlekazi iPacific.
I-Port of Siuslaw iyisifunda esikhethekile esinezici ezikhethekile ezincike kakhulu ekuhehekeni kwezivakashi, njengemidlalo yezemidlalo kanye nezentengiselwano, ukwethulwa kwesikebhe, ipaki yezimboni, kanye nenkundla yezindiza yeRV yokuthuthukisa ezomnotho. Kodwa-ke, ngenxa yokungakwazi ukuhamba ngokuphepha ezindleleni zamanzi endawo kanye nokwehla kwenani lezindawo eziqashisayo nezihlala isikhathi eside esikebheni esikebheni edamini laseSiuslaw River marina, ababonisi abajwayelekile kanye nabasebenza esikebheni bezikebhe baphoqeleka ukuthi bathathe ibhizinisi labo kwenye indawo.
Abasebenzi bazobe besebenzisa i I-Ellicott Series 360SL Swinging Dragon® dredge, ephethwe yisifundazwe sase-Oregon, ukuqedela iphrojekthi yokubuyiselwa komhlaba. Ezimweni eziningi, abakwa-US Army Corps of Onjiniyela ngokuvamile babephatha umthwalo wemfanelo wokulungiswa kabusha kweziteshi ngonyaka; noma kunjalo, ukumbozwa akunwebi ukuvula umkhondo nama-marinas. Kuze kube muva nje, amachweba amancanyana awakwazanga ukukhokhela izindleko zokunciphisa ama-marinas awo, okuholele enanini elikhulu lokudubula ngaphakathi kwezilwandle ezigudle ulwandle i-Oregon. Umphumela walokhu kubhaxabula usongela ikhono lezikejana zokudoba nezokuzijabulisa zokumuka, ukuveza imiphumela emibi kwezomnotho.
Ukulungiselela kokugcina kwehla endaweni yase marina sekufakazele ukuthi kuyinselele njengoba iqembu lilwa ngokushesha isimo sezulu esishintsha, amagagasi aguqukayo, kanye neminyaka yolwandle kanye nemfucumfucu yomfula esezinze noma eduze kwendawo. Njengoba amalungiselelo esondela esiphelweni, iMenenja yePortus yaseSiuslaw, uDave Huntington ikholelwa ukuthi izinto sezithuthuke kahle nokuthi ukuzithoba kuzoqala ngaluphi usuku manje.
“Njengamanje, babeka amapayipi asuka endaweni lapho ezokwehlela khona engxenyeni engemuva yetheku lapho sizokophela khona udaka nokungcola. Beza neqembu elincane elivela eCoos Bay, futhi ngalesi simo sezulu kuthathe isikhathi eside ukwedlula esacabanga ukulungisa konke. Izolo, sithuthele amanzi edokodweni ngabakwaNovelli kanti amapayipi kufanele abekhona ngokuphela kosuku, okusho ukuthi sesizoqala ukususa udaka kule ndawo. "
I-Ellicott® swinging ladder dredge inayo injini yedizili eyodwa enikwa amandla ozimele we-hydro-static pump drive nephampu lesibili lokulawula okulekelelayo. I-Series 360SL Swinging Dragon® dredge ilungele izinhlelo zokwenza imina nokubuyiselwa komhlaba kabusha.
Ukuthola imininingwane eyengeziwe ngomugqa wethu ophelele wokusika nokufaka izitebhisi, kufanele uxhumane nathi ku sale@dredge.com noma uqedele eyethu ifomu leprojekthi, futhi othile uzokuthinta kungekudala.